Maalinta: Ogast 8, 2019
Ogeysiis buuxa oo ka socda Wakiilada Wershadaha Elevator iyo Xarunta Imtixaanka cusub ee BTSO
Xubnaha Kooxda Warshadaha ee Bursa Elevator (BURSAD), BTSO oo ay hirgalisay qaybaha amniga ee wiishka lagu qaado ayaa lagu tijaabiyay habka ugu aaminka badan 'Xarunta Baaritaanka Qalabka Amniga Elevator iyo Xarunta Horumarinta waxay sameeyeen dib u eegis. Warshadaha wiishka ee Bursa [More ...]
Maamulka magaalo-xeebeedka Kahramanmaraş ayaa sheegay inta lagu guda jiro Ciidul Adxaa inay qaadi doonaan rakaab bilaash ah basaska degmada. Qeybta Gaadiidka ee Dowlada Hoose ee Magaalada Kahramanmaraş waxay kusii dhowaaneysaa Ciidul Adxaa kahor inta uusan injiilka imaanin. dhigay [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Diyarbakır waxay bixin doontaa adeegyo gaadiid dadweyne oo bilaash ah inta lagu gudajiro 4 Day inta lagu gudajiro Ciidul Adxaa. Maalinta koowaad ee fiidka iyo iidda, muwaaddiniinta waxaa lagu geyn doonaa xabaalyada lacag la’aanta ah oo laga soo qaadayaa qodobbada loo qoondeeyey iyada oo siddooyinka lagu abuuri doono gawaarida 63. [More ...]
Basaska Denizli 2 Day Waa Bilaash
Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli waxay ka dhigtay basaska dadweynaha lacag la’aan maalinta ugu horeysa ee 2 Maalinta Ciidul Adxaa si looga hor tago muwaadiniinta inay ku adkaato booqashada qabuuraha, ehelka iyo asxaabta. Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli, muwaadiniinta degan oo raaxo leh [More ...]
Mid kale oo Tarsus ah oo ka socda Magaala-weynta
Dowladda Hoose ee Magaaladda Mersin waxay dhameystirtay u diyaargarowga Ciidul Adxaa iyadoo la adeegsanayo cutubyadeeda oo dhan. Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin, oo muujineysa dareenkeeda bulshada ee goob kasta, waxay bixisaa gaadiid rakaab oo bilaash ah Xabaalaha Magaalada, kaasoo laga adeegsaday xaafadaha qaarkood ee Tarsus waqtiyadii hore. [More ...]
Dawladda Hoose ee Gaziantep, muwaadiniinta Ciidul Adxaa waxay u xasilloon yihiin, nabad iyo nabadgelyo ay ku dhammaystiraan diyaarinta. Taabashada nolosha dadka leh dhowr mashruucyo bulsheed, magaalo weyn, 4 maalin kahor Gaadiidka Ciidul Adxaa, xabaalaha iyo [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu ku qabtay kulan muhiim ah Erciyes. Duqa magaalada Büyükkılıç ayaa la kulmay maalgashadayaasha Erciyes, oo ah dhulka loo qoondeeyay maalgashadayaasha sida ugu dhaqsaha badan si ay xarumo u raadsadaan. [More ...]
Duqa Kocaeli Assoc. Dr. Tahir Büyükakın wuxuu warbixin siiyay suxufiyiinta ku saabsan Mashruuca metro Gebze-Darıca. Isagoo caddeeyay in Mashruuca mitirka, oo qiimahoodu qiyaastii yahay 5 Bilyan oo TL, loo wareejiyay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha. [More ...]
Sanadihii ugu dambeeyay, wasakheynta deegaanka ayaa gaartay heer qatar ku ah caafimaadka dadka iyo waxyaabaha kale ee nool. Gaar ahaan magaalooyinka waa weyn ee tirada baabuurtu aad u badan yihiin, waxaa la arkay wasakhowga hawada iyo dhibaatooyin caafimaad oo culus. [More ...]
TCDD waxay Xallisaa Dhibaatadeeda Co-Cireedka Tareenka
Tareenka, dhibaatada qalalaasaha iibka tikidhada ayaa la xaliyay, xitaa haddii ay tahay xaas ku xigta rakaabka dumarka ah oo tigidhkeeda la iibsaday ama ballansaday. Gaadiidka TCDD wuxuu u magacaabay kişi terminal qof amaçla ujeedkan. Sarkaal Toll, iibinta tikidhada [More ...]
Medipol ilaa Birgün 'TCDD' Disclaimer
Jaamacadda Medipol waxay ka soo horjeesatay warkii ahaa in TCDD Guest House iyo Dhismaha Matxafka TCDD la siiyay. Wargeyska Jaamacadda Birgün ee diidmada ah "wax naloo siin waayey, ayaa loo qoondeeyay," ayuu yidhi. Jaamacada Medipol, wargayska Birgün 29 Luulyo [More ...]
Qiimaha Doolarka oo La Jaray, Qandaraas Cusub oo Loogu Sameeyay Istanbul
Wasiirka Gaadiidka Cahit Turhan Kanal ayaa shaaca ka qaaday in dhibaatada ugu weyn marka la eego qiimaha Istanbul ay tahay sicirka doolarka. Qiimaha doolarka ayaa hoos u dhacay, indhaha ayaa mar kale u weecday jihada Istanbul Channel. Marka, waa maxay jilicsanaanta Kanal Istanbul [More ...]
Taraamku ma u tagi doonaa Derince?
Duqa Kocaeli Assoc. Dr. In kasta oo Tahir Büyükakın uu ahaa xarunta bulshada ee degmada Kandira, 500 wuxuu la kulmay ardayda iyo qoysaskooda iyo suxufiyiin ka hawlgala aagga xerada oo la siiyay adeegga dhalinyarada iyo ciyaaraha. aad [More ...]
Goorma ayaa la furi doonaa Eminönü Alibeyköy Tram Line?
Goorma ayaa la furi doonaa khadka Eminönü-Alibeyköy Tram? Maxaa ugu dambeeyay? Khadkii tareenka, oo loo qorsheeyay in la fuliyo dhamaadka sanadka, ayaa la gelin doonaa adeegga bartamaha-2020. Khadka Eminönü-Alibeyköy Tram wuxuu ku yaal Istanbul. line [More ...]